लघुकथा : तीजमा फक्रिएको मन - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
लघुकथा : तीजमा फक्रिएको मन
प्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र २१, सोमबार २०:१६
कालुकी आमाले निकै आँट गरेर आफ्नो बुढा सँग मायालु भावले भनि,’तिज आइसक्यो !! तीन बर्ष देखि एउटै सारी लाउँदैछु, यसपाली त नयाँ किनिदिनु है !’
अँ….. म पनि सोच्दैछु त्यो कुरा त ! हेरौं, अफिसको एउटा काम मिलाइदिनु छ। त्यो हुनसक्यो भने त दुइटै किनिदिने थिएँ। तर खै अख्तियार निकै चनाखो भएको छ, धेरैतिर छापा मारेको खवर सुनिँदै छ।
आ….. केही हुन्न क्या, हजारौंमा एक दुईटा त समातेको छ नि ! फेरि भएन तपाईँको अफिस त,
त्यति चर्चामा पनि त आएको छैन। डराएर त कहाँ प्रगति गर्न सकिन्छ र ? कस्ता कस्ता नपत्याउनेहरुले पनि, आफ्नो हैसियत कहाँ पुर्‍याइसके ? हामी भने सधैँ उस्ताको उस्तै!!
अँ.. हो त्यो त!
आफ्नी जीवन सँगिनीको ढाढसले, आत्मवल र आत्मविश्वासको सास फेर्यो कालुको बाबुले। मानौं कुनै नयाँ मार्ग पहिल्याए जस्तो, अलिकति हौसला अलिकति आँटले, एउटा अठोट पहिल्याउन सफल भयो ऊ।
तीज आउन तीन दिन मात्रै बाँकी थियो, कालुकी आमा दङ्ग परी! फेसनका सौखिन उसका साथीहरूको भन्दा, अब्बल डिजाइनका एकसे एक तीन तीन वटा साडी र दाम्मी लहङ्गा मात्रै होइन, छड्के तिलहरी र चन्द्रमा पनि देखेर।
मनमनै गर्व गरी, आफुलाई यति धेरै मायाँ गर्ने बुढो पाएर । उठेर बुढोलाई अँगालो मारी, अनि भावबिव्हल भएर भनी, ‘यस्तो मान्छे त कसैले पनि पाउँदैन।’कालुको बाबु पनि दङ्ग थियो आज, बल्ल स्वास्नीको आकाङ्क्षा पूरा गरिदिन सकेकोमा ।
आखिर तीज आइ नै पुग्यो। पुरुषको तीज त कहिल्यै आउने होइन क्यारे! खाना खाएर कालुको बाबु अफिस हिँड्यो। कालुकी आमा मनभरि उत्साह र उमङ्ग पोको पारेर रमाइलो जमघटमा गरेर तिज मनाउन साथीहरूले सल्लाह गरेर निर्धारण गरेको पार्टी प्यालेस तिर लागि।
कालुकी आमा, दिनभरी नाची ! छमछम नाची..
कम्मर भाँचेर नाची… छड्के तिलहरी लर्काउँदै नाची… र्‍याप, पप, डिस्को सबैखाले गीतमा…
अरु बर्षको भन्दा मन फुकाएर नाची। नाच्ता नाच्तै दिन सकियो, धित मरेकै थिएन साँझ पर्यो।
तिजको जोडदार समीक्षा गर्दै, सबै जना लागे फेरि उही… दैनिक विरक्तिले वास बस्ने थलोतिर। घरमा पुगेर हेरी कालु र बैनी मात्रै टिभीमा कार्टुन हेरेर बसेका छन्, बुढा आइपुगेका रहेनछन्।
केहीबेर पछि छिमेकी माल्दाई आइपुगे, खवर छाडेर गए, आज भाइको अफिसमा अख्तियारले छापा मारेछ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा, भाइलाई त हिरासतमा राख्यो अरे । सुन्ने बित्तिकै तीजमा फक्रिएको कालुकि आमाको मन एक्कासी ओइलायो !!
प्रमिला पाण्डे(थापा) बच्चैदेखि सिकाइयो कर्तव्य के हो भनेर। कर्तव्य के हो भनेर थाहा पाइयो सानैदेखी
पार्टी बिभाजन हुंनै लाग्दा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले लेखे कविता ‘प्रवृत्ति फेरिनु पर्छ’
प्रवृत्ति फेरिनु पर्छ ! -भीम रावल पात्र मात्र फेरिदैमा हुँदैहुन्न, प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ मीठा शब्दजालहरुमा हाईन,
संजय राज शर्माका मुक्तकहरु
शृङ्गार रस १ रातभरि बहकिएको बात भयो साथ हाम्रो चाँदनीको बारात भयो कसलाई पो थियो
निलाञ्जला भार्द्वाजका मुक्तकहरु
शृङ्गार रस १ घुमाउरो त्यो कुरा गर्दै, कलेजीमै बस्न खोज्छौ आँखा–आँखा जुधाएर, मुटुभित्र पस्न खोज्छौ